Umadd waliba waxay heshaa maamulkay istaahisho!! • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Editorial / Umadd waliba waxay heshaa maamulkay istaahisho!!
Umadd waliba waxay heshaa maamulkay istaahisho!!
July 21, 2010 - By: Khalid Yusuf
Waxaa dhowaan la xusay sanadguuradii 50aad ee aasaaskii dowladii Soomaaliya. Waa la wada soconaa marxaladihii Soomaaliya soo martay intay soo jirtay. Jiilkeenii dhashay 70-tanaadkii iyo intii naga danbeysay wax badan oo wanaag ah kamaan arag dowladnimida.
Waxaan jeclaan lahaa oo kale inaan kusoo gabagabeeyo qoraalkaygan erayo uu tiriyey Allaha u naxariisto Cabdi Muxumad Amiin sanadkii 1995 lana magacbaxay “WASIIR BEELI KEENTAY”
Wasiir qolo ku yimidoow
Wax usheegay una sheegay
Waxaan soo xigtay (baaritaankaan sameeyey):
Qoraagu aad ayuu ugu mahadcelinayaa dhamaan walaaha waqtigooda siiyey akhrinta qoraalkan. Waxaan rajeyn inaan fikradihiina dhaliil iyo amaanba iisoo gudbisaan. Mahadsanidiin!